avril 2014 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Alahady faharoa paka – 27/04/2014 – Toriteny
Ny alahady faharoa fankalazana ny Paka no ankalazana ny andron’ny “Divine Miséricorde” – “Famindrampon’Andriamanitra”. Ny Papa Joany Paoly faha-II no nanokana an’io alahady faharoa amin’ny Paka io ho andron’ny famindrampon’Andriamanitra, ary napetraky ny Eglizy ho androany ihany koa hanandratana Olomasina ny Papa Joanay Paoly faha-II sy Jean XXIII.
Tsy miafina amin’Andriamanitra ny fahalementsika olombelona, toy ny niainan’ireo Mpianatr’I Jesoa talohan’ny nitsanganany ho velona, nanana ny fahalemeny ireo na dia niaraka tamin’I Jesoa isan’andro aza, tao ny namadika azy, tao ny nivarotra an’I Jesoa, nadao Azy daholo ny mpianatra t@ fotoana sarotra. Na izany aza anefa no nataon’ny mpianatra, I Jesoa tafatsangan-ko velona namindra fo tammin’izy ireo, namerina ny fitokisany tamin’izy ireo. Maneho famindram-po izany fihetsika izany. Dia izany famindrampon’Andriamanitra izany indrindra no anantenantsika sy andrandraintsika amin’izao alahady izao. Mifandray amin’izany famindram-pon’Andriamanitra izany ny fanomezan’I esoa ny Fanahy Masina ho amin’ireo Mpianany rehefa tafatsangan-ko velona Izy, araka ny teniny amin’ny Evanjely androany “Raiso ny Fanahy Masina, ny fahotàna izay havelanareo dia ho voavela, ary izay ho tànanareo dia ho voatana”.
Fanantenana lehibe ho antsika izany satria difitra sy lavo matetika ao anatin’ny fahotàna isika olombelona. Ho antsika, na inona na inona fahalementsika, eo @ maha-olombelona, na inona na inona fahotantsika, rehefa mitodika amin’Andriamanitra isika, mitodika ami’ny famindrampon’Andriamanitra, dia mamindra fo amintsika mandrakariva Andriamanitra. Miantso antsika I Jesoa mba hilomano ao antin’ny ranomasimben’ny famindrampon’Andriamanitra. (suite…)
Continuer la lecture Alahady faharoa paka – 27/04/2014 – Toriteny
« Nony afaka hateloana dia tonga i Jesoa. » (suite…)
Continuer la lecture Alahady faharoa paka – 27/04/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady Paka – 20/04/2014 – Toriteny
Taminy andron’ny Sabata , vao mazava ratsy ny andro voalohan’ny herinandro dia nandeha tany amin’ny fasana i Maria Madelenina sy Maria anankiray. Ary nisy horohoron-tany mafy sy Anjelin’ ny Tompo nanakodia ny vato nanarona ny fasana ary nipetraka teo amboniny.
Izay no tantaran’ny nitsanganan’i Jesoa ho velona.
Io fitsanganan’I Jesoa ho velona io no fototry ny finoantsika, satria raha tsy nitsangan-ko velona I Jesoa tsy ho nisy ireo fety litorjika rehetra ankalazain’ny Fiangonana, toy ny Noely, Pantekoty sns. Izany fototry ny finoantsika izany no hijoroantsika ho vavolombelona eo amin’ny fiainana an-davanandro. Rehefa mitso-drano amin’ny famaranana ny Sorona Masina ny Pretra dia miteny hoe: “hitantana ny dian-tsika I jesoaKristy”, ny valy asetrintsika izany dia ny hoe: “Isaorana anie Andriamanitra”, rehefa izany dia lasa indray isika miatrika ny fiainantsika andavananadro. Koa rehefa mahazo izany tso-drano izany dia adidintsika ny mandeha mitory, mizara ny hafaliana ny amin’I Jesoa tafatsangan-ko velona. Fa tena tsapantsika tokoa ve moa ny halehiben’izany hafaliana amin’ny fitsanganan’I Jesoa ho velona izany, toy ny hafalian’ireto vehivavy roa sy ireo Mpianatra nahita an’I Jesoa velona indray.
Azontsika alaina sary an-tsaina, olona iray andrin’ny fianakaviana ao an-tokatrano, tratry ny aretina dia maty, mitomany ny mpianakavy,malahelo ny mpiara-monina,malahelo ny Havana aman-tsakaiza rehetra dia mahavatra miari-tory mandramaraina miandry faty, nefa tampotampoka teo indro fa mihiratra, velona, mitsangana indray dia manakory ny hafaliantsika? Fa mihoatra lavitra no izay ny hafalian’ireo mpianatra satria nitsagan-ko velona ny Tompo izay narahina
Ny tsy maintsy ataontsika dia ny mitory an’I Kristy nitsagan-ko velona, mizara izay hafaliana izay, mizara izany fanantenana izany amin’ny olona, mijoro ho vavolombelona ny Kristy tafatsanga-ko velona amin’ny tenantsika, izay ny fitoriana ny vaovao mahafaly ataontsika. Ny fiainantsika andavan’andro io, ny asantsika, ny tenintsika, ny fihetsika, ireny rehetra ireny no akon’ny Kristy tafatsanga-ko velona. (suite…)
Continuer la lecture Alahady Paka – 20/04/2014 – Toriteny
Alahady Paka – 20/04/2014 – Tenin’Andriamanitra
Evanjelin’i Jesoa Kristy nosoratan’i Md Matio (Mt 28, 1- 10)
Efa nitsangan-ko velona Izy, ary indro hialoha anareo any Galilea. (suite…)
Continuer la lecture Alahady Paka – 20/04/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady sampakazo – 13/04/2014 – Toriteny
Ny lalan’ny hazofijaliana no lalam-pamonjena nizoran’i Jesoa Kristy hamonjena antsika.
Nandrita ny fotoanan’ny Vakiteny hatramin’ny ranombavaka, ireo ankizy rehetra dia napetraka ao amin’ny « Salle d’œuvre », ary manaraka an-tsary ny tantara sy nijalian’i Jesoa Kristy, manomboka teo amin’ny sakafo farany, mitohy amin’ny nisamborana an’i Jesoa, ny nanamelohana Azy teo anatrehan’i Pilato, ny nametrahana ny fehiloha tsilo, ny nitondràny ny hazofijaliana miakatra mankany amin’ny tanin’ny Karandoha.
Izany hoe mifanaraka amin’ireo Vakiteny, ny Evanjely, ny sarimihetsika arahan’ny ankizy an-tsary ao amin’ny Salle d’œuvre.
Vita izany (manomboka amin’ny ranombavaka), dia manaraka mivantana (aminn’y fahitalavitra lehibe) ny Sorona Masina ato am-piangonana ireo ankizy ireo.
Natao izany satria tsy antonona ny kristianina rehetra intsony ny fiangonantsika.
Raha jerena hatrany amin’ny niatombohana, dia ny sampankazo izany.
Marihina etoana fa nanomboka tany Manelo ny diabe (procession).
Fa nahoana?Ary inona no anton’ny Diabe?
Eo ny maha-fanehoam-pinoana am-pahibemaso
Ary indrindra koa dia mba hamerina ireo fihetsika nataon’ireo jody fahiny, raha niakatra ho ao Jerosalema I Jesoa
Inona no nataon’ny vahoka? (suite…)
Continuer la lecture Alahady sampakazo – 13/04/2014 – Toriteny